China 3D Embossing bebe kokoa Waterproof Hollow WPC Decking mpanamboatra sy mpamatsy | Lihua
3D Embossing bebe kokoa Waterproof hollow WPC Decking
Fananana vokatra:3D WPC Decking
Vidiny:2,45 $ / M
Loko:Volondavenona, Teak, Arina, Chocolate, Brown, sns
2.4m, 3.6m, na namboarina
Tokotany, zaridaina, zaridaina
Voasoka sy Sanding
1.New teknolojia 3D embossing WPC gorodona haingon-trano ivelany, fanatsarana haingon-trano. Teknolojia embossing 3D dia teknika sokitra ambonin-javatra. Ny gorodona tsirairay dia mitovy amin'ny sary sokitra, ary ny tontolon'ny zavakanto sy ny mari-pahaizana dia nihatsara. Ny embossing 3D Classical dia fanatsarana lehibe amin'ny gorodona vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo, izay tsy vitan'ny voasokitra miaraka amin'ny tarika fotsiny fa koa manohana ny soritry ny fiolahana.
2.Ny tradisiona wpc fitambaran-tarehy decking dia mora very voa eny ambonin'ny, decking super embossed manao tsara kokoa noho ny hazo mitambatra mahazatra, dia voajanahary sy manintona kokoa, manalefaka sy mahatohitra tsara kokoa.
3. Ny embossed super an'i Luua Fametahana WPC manana ny tombony rehetra amin'ny fomban-drazana fametahana composit , mbola tazonina izy io: tsy tantera-drano, anti-UV, mahatohitra toetr'andro, miady amin'ny harafesina, fisorohana bibikely, fikojakojana ambany, fiainana serivisy lava sns… Ary ny takelaka misy embossed lalina dia toa mahatsapa kokoa ny hazo voajanahary noho ny fitsaboana 3D embossing an'ny ny ambonimbony.
Maina ny fanoherana
EN 15534-1: 2014 Fizarana6.4.2 CEN / TS 15676: 2007 EN 15534-4: 2014 Fizarana 4.4
Tombana pendulo Pend36
Toro-lalana Longtitudinal: midika hoe 72, Min 70 Toro marindrano: Midy 79, Min 78
Toro-lalana Longtitudinal: midika 46, Min 44 Toro marindrano: Midy 55, Min 53
Fanoherana ny fiantraikan'ny besinimaro
EN 15534-1: 2014 Fizarana7.1.2.1 EN 15534-4: 2014 Fizarana 4.5.1
Tsy misy na dia iray aza amin'ireo famaritana ireo raha tsy misy tsy fahombiazany miaraka amin'ny halavany crack
10mm na ny halalin'ireo indentation residual≥0.5mm
Max. Halavan'ny vakivaky (mm): Tsy misy triatra Max. Indenation (mm): 0.31
EN15534-1: 2014 AnnexA EN 15534-4: 2014 Fizarana 4.5.2
-F'max: Midiny≥3300N, Min≥3000N
-Deflection ambanin'ny enta-mavesatra 500N mean≤2.0mm, Max≤2.5mm
Hery hiondrika: 27,4 MPa Modulus ny elasiticity: 3969 MPa Fatra be: Min 3786N, Min 3540N Fivoahana amin'ny 500N: Midika: 0.86mm, Max: 0.99mm
EN 15534-1: 2014 Fizarana7.4.1 EN 15534-4: 2014 Fizarana 4.5.3
Fatra fantatra amin'ny fampiasana azy: Midika ∆S≤10mm, Max ∆S≤13mm, Midika ∆Sr≤5mm
Span: 330mm, midika ∆S 1.65mm, Max ∆S 1.72mm, midika ∆Sr 1.27mm
Mivonto sy mitroka rano
EN 15534-1: 2014 Fizarana8.3.1 EN 15534-4: 2014 Fizarana 4.5.5
Midina ny fivontosana: ≤4% ny hateviny, -0,8%
amin'ny sakany, ≤0,4% ny halavany Max fivontosana: ≤5% ny hateviny, ≤1,2% ny sakany, -0,6% ny halavany Nentona rano: midika: ≤7%, Max: -9%
Midina ny fivontosana: 1,81% ny hateviny, 0,22% ny sakany, 0,36% ny halavany Max nivonto: 2,36% ny hateviny, 0,23% ny sakany, 0,44% ny halavany Nentona rano: Midika: 4,32%, Max: 5,06%
EN 15534-1: 2014 Fizarana8.3.3 EN 15534-4: 2014 Fizarana 4.5.5
Mitroka ny lanja amin'ny rano: mean≤7%, Max≤9%
Fandraisana rano amin'ny lanja: Midika: 3.06%, Max: 3,34%
Coefficient fanitarana hafanana Linear
EN 15534-1: 2014 Fizarana9.2 EN 15534-4: 2014 Fizarana 4.5.6 ISO 11359-2: 1999
Fanoherana ny fikolokoloana
EN 15534-1: 2014 Fizarana7.5 EN 15534-4: 2014 Fizarana 4.5.7
Hamafin'ny Brinell: 79 MPa tahan'ny fanarenana elastika: 65%
EN 15534-1: 2014 Fizarana9.3 EN 15534-4: 2014 Fizarana 4.5.7 EN 479: 2018
Temperatura fitsapana: 100 ℃ Midika: 0,09%
Teo aloha: 3D Embossing Weather Resistance Composite Hollow WPC Decking
Manaraka: Famonoana bibikely hazo azo alaina vita amin'ny plastika WPC Decking
Torolàlana momba ny fametrahana birao
Miaraka amin'ny fametrahana sy fikarakarana sahaza azy, ny vokatra hazo dia azo antoka fa hanome fahafinaretana ivelan'ny trano mandritra ny taona maro. Mba hahatratrarana fametahana vokatra vita amin'ny hazo tsy misy olana:
-Manontania kaody fananganana eo an-toerana alohan'ny hametrahana azy.
-Familiera amin'ny teninao amin'ny fametrahana azy.
-Atao antoka fa manana ny fitaovana sy ny fitaovana ilaina rehetra ianao-araka ny voatanisa ao amin'ny takelaka fampianarana.
Fitehirizana sy fikirakirana
-Aza manary fitaovana hazo mihitsy rehefa mamoaka entana.
-Mivarotra amina velarana fisaka ary rakofana fitaovana tsy translucent.
-Rehefa mitondra hazo fisaka ianao dia ataovy izay hahazoana fanohanana tsara kokoa.
-Mba jereo ny torolàlana momba ny fametrahana torolàlana fanampiny amin'ny vokatra tsirairay.
Fitsipika momba ny fikarakarana sy ny fikirakirana momba ny famonoana
Mba hampihenana ny gorodona, kitroka, fanapahana ary lalan-kely, ary hitehirizana ny hakanton'ireo famoloana hazo. Araho ireto toro lalana ireto:
-Aza mifanosika amin'ny birao mifanohitra rehefa mifindra izy ireo. Rehefa esorina ao amin'ilay singa izy ireo dia atsangano ireo takelaka ary apetaho.
-Aza mikorisa fitaovana na hisintona fitaovana manerana ny tampon'ireo birao mandritra ny fanamboarana.
-Atao tsy hitahiry fako ny tampon'ireo birao, ary mitahiry fako sy potipoti-javatra fananganana manerana ny latabatra, izay manampy amin'ny fikororohana.
-Raha miasa miaraka amin'ny vokatra hazo na fitaovana fananganana dia alao antoka fa mitafy akanjo sy fitaovana fiarovana azo antoka ianao.
-Ny vokatra vita amin'ny hazo rehetra dia azo ampiasaina ny fitaovana miasa hazo mahazatra, araky ny torolalan'ny mpanamboatra azo ampiharina.
-Scrap dia azo ariana miaraka amin'ny fako ara-dalàna fananganana.
-Ny hazo dia manana fanoherana tsara slip na maina.
-wood dia manana rafitra fastener miafina ary mora ny mametraka clip hazo.
-Mampiasà farafahakeliny # 8 x 2-1 / 2 ”fehiloha vita amin'ny kofehy avo lenta, vy na baoritra matevina.
-Mba takiana mialoha ny fandavahana ary rehefa ao anaty 1-1 / 2 ”amin'ny faran'ny tokotanin-tsambo
-Aza mampiasa lakaoly na caulk hamehezana ny vatan-kazo na hamehezana ny fihaonana eo anelanelan'ny takelaka roa sy ny faritra hafa.Hanakana ny fanitarana voajanahary sy ny fihenan'ny zana-kazo io ary hanakantsakana ny fivoahan'ny lakandrano.
Ilaina ny rivotra madio
- Mba hampihenana ny fananganana hamandoana ao ambanin'ny tokotanin-tsambo, tsy maintsy misy farafahakeliny
amin'ny habakabaka mitohy 12 "avo tsy misy sakana amin'ny lafiny telo amin'ny tokotanin-tsambo mba ahafahan'ny rivotra miditra.
Ity dia tokony ho hita eo ambanin'ny farany ambanin'ny deck deck.
-Amin'ny fampiharana voafetra sasany, ao anatin'izany ny birao natsangana teo an-joro anatiny, dia ilaina ny fametahana rivotra fanampiny izay hihaonan'ilay tokotanin'ny trano. Ny tsy fanomezana rivotra madio dia mety hiteraka tsy fahombiazan'ny tontolon'ny tokotanin-tsambo ary hanafoana ny fiantohana.
Lisen Wood fametrahana torolàlana fametrahana
Azonao atao ny mitahiry ny fotoana sy ny vidin'ny fanamboarana amin'ny alàlan'ny famolavolana endrika, drafitra handoavam-bola ireo fitaovana ilaina arakaraka ny tanjon'ny programa. Azonao atao ny misafidy ny fitaovanao manokana arak'izay tadiavinao miaraka amin'ny karazany maro karazana hazo tsy voatery, fanamboarana hazo, milina fanaovana hazo dia azo ampiasaina amin'ny fanapahana, famakiana, fandavahana ary sns.
Rehefa apetrakao ny fametahana entana dia tokony hataonao amin'ny tany aloha ny fanamboarana mihamafy, ary avy eo amboary ny vongana amin'ny tany mihamafy. Manoro hevitra ny pitch joist izahay amin'ny 35-40cm. Ny elanelan'ny Joist koa dia mety hohafohezina raha angatahina.
Diniho ny elanelam-potoana 3cm mankany amin'ilay trano rehefa apetrakao ilay decking.
Ny kitapo iraika amin'ny fametahana hazo dia kofehy vy. Ny fitrandrahana dia tokony ho kely kokoa noho ny savaivony amin'ny savaivony volo amin'ny 3/4 mba hampitomboana ny fihodinan'ny visy amin'ny hoho.
Mandondòna moramora ny fametahana lamba amin'ny alàlan'ny hametana fingotra mandritra ny fanamboarana hahazoana antoka fa misy banga mitovy sy ny tampon'ny fananganana tsara tarehy.
Ny halavan'ny metaly dia hisy fiantraikany amin'izany noho ny velaran'ny fananganana lehibe kokoa. Amporisihinay ny faritra ny elanelam-potoana 5mm rehefa ilaina ny faritra ampitana.
1.You dia afaka mampifandray ny lalan-drivotra ary manambatra amin'ny vodi-paipaika raha toa ka tsy misy ny clip ho an'ny fampifandraisana ny joist sy ny decking.
Safidio ny tabilao mifameno mba ho sisin-tany arakaraka ny haben'ny joist sy ny decking rehefa vita ny fanamboarana.
Fametrahana Aviavy clip plastika
Rehefa apetrakao ny fametahana entana dia tokony hataonao amin'ny tany aloha ny fanamboarana mihamafy, ary avy eo amboary ny vongana amin'ny tany mihamafy. Manoro hevitra ny pitch joist izahay amin'ny 35-40 cm. Ny elanelan'ny Joist koa dia mety hohafohezina raha angatahina.
Diniho ny elanelana 3cm mankany amin'ilay trano rehefa apetrakao ilay decking.
Kitapo miaraka amin'ny fametahana kitay vita amin'ny kitapo vita amin'ny vy. Ny fitrandrahana dia tokony ho kely kokoa noho ny savaivony amin'ny savaivony volo amin'ny 3/4 mba hampitomboana ny fihodinan'ny visy amin'ny hoho.
Azonao atao ny mampifandray ny lalan-drivotra ary manambatra amin'ny visy fanidiana tena raha toa ka tsy misy ny rakipeo amin'ny fampifandraisan'ny joist sy decking.
Apetraho ny decking matevina
Rehefa apetrakao ny fametahana entana dia tokony hataonao amin'ny tany aloha ny fanamboarana mihamafy, ary avy eo amboary ny vongana amin'ny tany mihamafy. Manoro hevitra ny pitch joist amin'ny 35-40cm izahay. Ny elanelan'ny Joist koa dia mety hohafohezina raha angatahina.
Diniho ny elanelam-potoana 3cm amin'ny tranobe rehefa apetraka ny rindrina matevina Ampidiro ny fametahana matevina amin'ny fantsika hita maso ary apetraho eo amin'ny sisiny ny fantsika 2cm.
Avereno ny fizotrany.
F: Mandra-pahoviana ianao no manavao ny vokatrao?
A: Havaozinay isam-bolana ny vokatray.
F: Inona ny fitsipiky ny famolavolana ny fisehoan'ny vokatrao? Inona avy ireo tombony?
A: Ny vokatray dia noforonina amin'ny fampiharana ny fiainana, toy ny anti-slip, toetr'andro mahatohitra, anti-fading, sns.
F: Inona avy ireo fahasamihafana eo amin'ny vokatrao eo amin'ny mpiara-mianatra?
A: Ny vokatra WPC dia mampiasa fitaovana tsara kokoa sy vaovao kokoa, noho izany dia tsara kokoa ny kalitao ary tombony ho an'ny teknolojia, tena tsara ny vidinay.
F: Iza ireo mpiasan'ny R&D anao? Inona avy ireo fepetra takiana?
A: Manana ekipa R&D izahay, izy rehetra dia manana traikefa feno amin'ny salanisa, efa niasa tao amin'ity faritra ity nandritra ny folo taona mahery!
F: Inona ny hevitra R&D momba ny vokatrao?
A: Ny hevitray R & D dia sariaka amin'ny tontolo iainana, fikojakojana ambany, fampiasana lava sy kalitao avo lenta.
F: Inona avy ireo famaritana ara-teknika ny vokatrao? Raha eny dia inona avy ireo manokana?
A: Ny fepetra arosonay ara-teknika dia ny halehibeny, ny fananana mekanika, ny fahombiazan'ny anti-slip, ny fahombiazan'ny rano, ny fahaizan'ny toetr'andro, sns.
F: Inona no karazana fanamarinana efa nolalovanao?
F: Iza amin'ireo mpanjifa no efa nandalo ny fanaraha-mason'ny orinasa?
F: Manao ahoana ny rafitry ny fividiananao?
3D gorodona decking
Decking WPC vita amin'ny embossed
Super Decosed Hollow decking
Famonoana WPC tsy tantera-drano
3D Embossing Weather fanoherana Composite Hollo ...
Kitapo hazo matevina vita anaty hazo ivelany
Ny ala ivelany dia misy ala maitso vita amin'ny emboka vita amin'ny tantera-drano WPC ...
UV fanoherana Deep Embossed Solid WPC Decking E ...
Fanapahan-tsokosoko WPC, fametahana plastika vita amin'ny hazo, Fanesorana WPC ivelany, Fanesorana ivelany WPC, Rihana fametahana WPC, Fitaovana WPC,